Okwamanje lithukululiwe iﬁndo lamaMpondo aseQaukeni - Bayede News
NGALESI sikhathi iNingizimu Afrika isemizamweni yokuthukulula amaﬁ ndo kusuka odabeni lomnotho, ubugebengu, ukubuyiswa komhlaba kanye noBukhosi. Isizwe samaMpondo aseQaukeni esifundazweni i-Eastern Cape ithukulelwe iﬁ ndo ebese lihlukanise isizwe noBukhosi phakathi. Lokhu kulandela isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo nebinquma ngodaba oluthinta iKumkani uZanozuko Tyelovuyo Sigcau.. Abamangali kuleli cala bekuyiNkosazana uWeziwe Feziwe Sigacu kanye neNdlovukazi uLombekiso Makhosatsini MaSobhuza Sigcau. Abamangalelwa bekunguNgqongqoshe Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu, uMengameli kanye neCommission on Traditional Leadership Disputes and Claims. Yize isinqumo siphume mhla zili-11 kuMandulo ngowezi-2018, icala liqale ukuba sezithebeni nalapho kwenziwe khona izethulo mhla zingama-20 kuNhlolanja kophezulu. Belilalelwe aBehluleli abayisi-9 okubalwa uMehluleli uZondo oyiSekela Mehluleli Omkhulu uCachalia ongMsizi Mehluleli, uDlodlo onguMsizi Mehluleli, uFroneman uMehluleli, uGoliath uMsizi Mehluleli, uJafta uMehluleli, uKhampempe uMehluleli, uMadlanga uMehluleli kanye noPetse uMsizi Mehlulelli. Esinqumweni sabo iningi labayisi-8 bavumelene nesinqumo kwathi oyedwa okunguMehluleli uFroneman wabangaphesheya.
Umsuka wakamuva Okumqoka ngesinqumo seNkantolo wukuthi yize besigxile kakhulu kwizincomo zeCommission on Traditional Leadership Disputes and Claims nedume ngele Khomishini kaNhlapho kulandelwa isibongo sikaSihlalo wayo uSolwazi uThandabantu Nhlapho, lo mdonsiswano usuka ngonyaka we-1937 ngesikhathi kukhothama iKumkani uMandlonke. Kokwakakamuva udaba luqalwe yisincomo seKhomishini kaNhlapho ngonyaka wezi-2008 nenqume ukuthi ukweseka umlando othi amaMpondo anoBukhosi obukhulu obunezizwe. Ngaleso sikhathi owayehleli esihlalweni yiKumkani uMpondombini Justice Sigcau. Isinqumo seKhomishini silandela isikhalo esabe sifakwe ngale nguMntwana uZanozuko Sigcau nowayemi kwelokuthi nguye okumele ngabe uhleli eSihlalweni sikaFaku hhayi owayehleli ngaleso sikhathi iKumkani uMpondombini. Emuva kokuthi uKumkani uMpondombini ephikisene nokushiwo nguMntwana uZanozuko, iKhomishini yaba nezithangami njengengxenye yophenyo lwayo. Lempi kwabe kuyimpi kaDavide noGoliyathi njengoba uKumkani uMpondombini wayebelwe zigqwele zabameli, kuthi ngakolunye uhlangothi uMntwana wabe ezenzela yena izethulo.
Emuva kokulalela ubufakazi banhlangothi zombili ngowezi-2010 iKhomishini yavumelana nesethulo kanjalo nobufakazi boMntwana neyabe isinquma ukuthi nguye okumele ahlale eSihlalweni. Leso sinqumo sadluliselwa kuMengameli wezwe kulandelwa inqubo yomthetho. Ukunikwa kukaMengameli lo mbiko kusuke sekumgunyaza ukuba akhiphe isitiﬁ keti asinike lowo okhonjwe ngengosemthethweni nokuyinto uMengameli uZuma ayenza ngalesi sikhathi. Nokho isenzo sakhe saphikiswa ngowabe eseSihlalweni, iKumkani uMpondombini nowaphikelela eNkantolo iNorthen Gauteng nokwenza isinqumo seKhomishini kanye nesinyathelo sikaZuma sihoxiswe okwagcina kuphelele eNkantolo YoMthethosisekelo. Akabange esaliqeda ibanga lecala uKumkani uMpondombini njengoba adlula emhlabeni emuva kokuhlaselwa wuhlangothi.
Ukubekwa kweNdlovukazi Kwathi ngokwedlula kweKumkani uMpondombini kanye nesinqumo sokuhoxisa isinqumo seNkantolo esabe sivuna uMntwana uZanozuko, umndeni weKumkani engasekho wabanomhlangano nayilapho waqoka indodakazi yayo uMntwana uWezizwe Feziwe Sigacu ukuba athathe izihlangu zikayise njengeNdlovukazi. Lesi sinqumo sadluliselwa kuMengameli wezwe ukuba asamukele njengesokugcina akhiphe nesitiﬁ keti njengokulawula komthetho . UMengameli uZuma waphikisana nalokho esho khona ukuthi umile ezincomweni zeKhomishini ekutheni uMntwana uZanozuko nguye iNkosana yamaMpondo aseQaukeni. Ukuhumusha kukaZuma umthetho akwehlanga kahle emndenini weKumkani endala njengoba uMntwana uWezizwe nonina uMaSobhuza noyindodakazi weNgwenyama uSobhuza baphikisana noMengameli.
INkantolo Enkulu yavumelana noZuma kulokhu, kanjalo naleyo yokudlulisa amacala yabona okufanayo. Okwabe kuphambi kweNkantolo Enkulumweni eqoshiwe iKumkani uMpondombili ayenza ngomhla lu lunye kuMbasa wezi-2011 iBAYEDE enayo , iKumkani eyabe ikhuluma isesibhedlela yabe inxusa ukuba isizwe samaMpondo silindele futhi sihloniphe isinqumo seNkantolo nathi yiso esizocaba indlela njengoba kwaba njalo ngesikhathi kunesimo esifanayo ngaphambilini. Wenza isibonelo ngalokho okwenzeka ngesikhathi kunombango phakathi koMntwana uNelson Sigcau noyise uBotha Sigcau nathi icala lathethwa ezinkantolo laze laﬁ ka esiphethweni. Khona lapho wakugcizelela ukuthi phezu kwezinqumo zezinkantolo, izwi elaphakama kwaba ngelamaMpondo. Okube sobala esinqumweni senkantolo wukuthi ayingenanga emlandweni neyabe ikholwa wukuthi lokho kwabe kungumsebenzi weKhomishini. Okunye okucaca wukuthi kayilithathanga ilungelo lomndeni wokuqoka iNkosana.
ISILO besizibambela kwezomnotho nakwezolimo
Eyabe ikucubungula ngokuthinta imithetho eyabe ibekelwe iKhomishini nethi yalandelwa yiyo iKhomishini noMengameli uZuma. Kulokhu uMehluleli uZondo wathi: “Sengiphetha ngifuna ukugcizelela lokhu: Sikhathi thizeni emveni kokuba iKhomishini isikhiphe isinqumo sayo sokuthi amaMpondo aseQaukeni ahlangabezene nezidingo zoBukhosi, uZanozuko afaka isicelo kuKhomishini sokuthi unegunya soku yiKumkani yamaMpondo aseQaukeni. Wonke umndeni wobumkani kufanele wazi wazi ngesicelo. UMpondombini kufanele azi noma kanjani ngoba wagcina esiphikisa isicelo sikaZanozuko futhi eqinisekisa ukuthi nguyena okufanele abe yiKumkani. Le mpikiswano yokuthi ngubani okufanele abe yiKumkani yamaMpondo aseQaukeni emveni kokulalela izethulo ezaziqhamuka nhlangothi zombili,” kusho uMehluleli uZondo. Uqhubeke wathi: “Isinqumo seKhomishini emveni kokuba ibhekisise kabanzi uMthetho Wesintu Nezithethe wanquma ukuthi uZanozuko uyena iKumkani hhayi uMpondombini.
Leso sinqumo seKhomishini sisamile. Ngaleyo ndlela ummangali wokuqala akakwazi ukuba wuKumkani noma yiNdlovukazi. Ngenxa yalezi zizathu isicelo siyachithwa,” kuphetha uMehluleli uZondo. Leli phephandaba lixhumene nokhulumela iKumkani evunwe yiNkantolo, uMntwana u-Advocate uMaraqana ongumumeli nothe uma sekuphele konke bengumndeni kumele babumbane. “Yebo siyakwamukela ukuthi inkantolo isivunile futhi yalungisa into eyaqala emuva kokudlula emhlabeni kweKumkani uMandlonke. Lesi sinqumo siqinisekisa ukuthi ulibo loBukhosi bamaMpondo bubuyele endaweni yabo. Nokho phezu kwalokho, yizingane zakwethu lezi ebesibanga nazo ezinkantolo. Umbono weKumkani uZanozuko ngothi asikwazi ukubalahla ngaphandle. Kufuneka sibumbane njengamaMpondo sizwe ukuthi uthini umbono wabo ngoba okumqoka wukwakha ubumbano kumaMpondo,” kusho uMntwana.
Bayede News Aug 21, 2018